Goorma ayaan lacag ku shaqayn karaa?
Ma lihid miyaa weli sharci degenaansho? Markaa 24 usbuuc sanadkii ayaad shaqo lacag ah qaban kartaa.
Waxaase lagaa rabaa sharuudaha soo socda:
• Waaxaad 6 bilood ama ka badan ku jirtaa dacwado magangelyada
• Si sharciga waafaqsan ayaad Nederland ku joogtaa
• Waxaad haystaa ruqsad shaqo (TWV). Qofka shaqada ku siinayo waxa uu ruqsadaasi TWV ka dalban karaa hay’ada shaqada-UVW.
Shaqada lacagta ah wax saamayn ah kuma laha in aad sharci degenaansho ah hesho ama aadan helin.
In aad Nederland joogi karo iyo in kale, kuma xirna in aad shaqo lacag lagu qaato heysato ama aadan heysan. Heysashada shaqo lacag lagu qaato inta ay dacwadda magangelyo socoto wax saameyn ah kuma laha helista ama helis la' aanta oggolaasho joogitaan.
Haddii aad leedahay shaci degenaansho, waad shaqayn kartaa sanadka oo dhan. Shaqo bixiyahaagana uma baahna in uu codsado ruqsad shaqo TWV.
Shaqo: mushahari, tabarruc ama tababar ah
- Ruqsad shaqo ee shaqada lacagta
English: When am I allowed to work for money?
Shaqo tababar ah/ waayoaragnimo shaqo
Shaqo tababar ah/ waayoaragnimo shaqo waxa laga helaa fursad aad rug hawlagal kaga shaqeyso aad aqoon iyo waayo aragnimo ka hesho. Dhab ahaantii ma aha meel aad u shaqeyso ee rug aad ku shaqo barato. Shaqo tababar ah/ waayoaragnimo shaqo waxaa loogu tala galay dadka xirfad barasho ku jiro iyo kuwa soo dhammeeyay waxbarashada xirfadda.
Kuwa leh oggolaasho joogitaan waxa ay tegi karaan shaqo tababar ah ama ka hawl geli karaan waayoaragnimo shaqo.
Magangelyodoon (oo aan weli lahayn oggolaasho degitaan oo ku guda jira dacwadda magangelyo weli) waxa oo keli ah u bannaan shaqo tababar ah.
• Marka loo kaco waxbarashada xirfadeed iyada oo la adeegsanaayo heshiiska dhismaha xirfadda, ama
• Mrka loo kaco waxbarashada xirfadda sare iyada oo la adeegsanaayo heshiiska shaqo tababar ah oo dhexmarta dudsiga sare ee xirfadda, shaqo bixiyaha iyo ardayga.
Guud ahaan qodobadan soo socda ayaa muhiim u ah shaqo tababar ah/ waayoaragnimo shaqo:
• rug shaqo tababar ah/ waayoaragnimo shaqo waa mid oo keli ah loogu talo galay waxbarsho ee ma aha shaqo, hawlgalayaasha shaqo tabar ah waxa ay qabtaan shaqo caawinaad ah;
• Bixiyaha rugta shaqo tababar ah waa midka bixiya hagista rugta shaqo. Waxaa muhiim ah in hagista ay ku beegan tahay waxbarasho ee aysan ku jeedin wax soo saar. Mana aha in tababar qaataha uu qaato jago uu lahaa qof shaqaale ah. Hawlgalka shaqo tababar ah/ waayoaragnimo shaqo ma aha kuwa ku beegan wax soo saar kaasi oo loogu talo galay in faa' iido lagu dhaliyo. Baarayaasha SZW ayaa taa kontrool ku haya;
• Bixiyaha rugta shaqo tababar ah waxa uu tababar qaataha u soo bandhigaayaa heshiis (shaqo tababar ah) kasoo xitaa ay ku qeexan tahay ujeedada waxbarasho;
• jago shaqo tababar ah/ waayoaragnimo shaqo waa mid ku kooban wakhti xaddadan;
• Jago shaqo tababar ah/ waayoaragnimo shaqo waxaa lagugu siin karaa mag dhow (shaqo tababar ah). Markaasi waxaa taa la marsiinayaa REBA.
- Waxa aad ku kabayso kharashka soo dhoweynta
English: Traineeship/Work experience place